We Fight We Win. -- " More than Media ": ချင်းပြည်နယ် လဲ လက်ပတောင်းတောင်လို့ အန္တရယ်ကျရောက်ခါနီးနေပြီ
ချင်းပြည်နယ် လဲ လက်ပတောင်းတောင်လို့ အန္တရယ်ကျရောက်ခါနီးနေပြီ
ကျေးဇူးပြုပြီ share ပေးကြပါ အလွန်အရေးကြီးနေလိုပါ
မြန်မာတိုင်းရင်းသား ညီအကိုများ သိစေရန်
၂၆.၁.၂၀၁၃ နေ့က မြ၀တီဘက်မှ မြန်မာလူမျိုး အယောက်သုံးဆယ်ကို ညနေ့ (၆) နာရီးမှာ ပွဲစား ကိုမင်းမင်းမှတဆင့် ထိုင်နိုငံပွဲစားလက်ထဲ့ကိုတဆင့်လွဲအပ်ကြောင်းကိုသိရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘက်မှပွဲစားအမည်ကိုမသိရသေပါ။ ၄င်းလူအယောက် (၃၀) ကို လှေအမည်ထိုင်လိုထစ် လှေနံပါတ်(၂၈) လှေထဲ့ကိုလူအယောက် (၃၀) လုံးလုံးအရောင်းစားခံရကြောင်းခိုင်လုံးသောသတင်းကိုရရှိခဲ့ပါသည်။သတင်းကို လှေထဲရှိ အရောင်းစားခံရသောသူများထဲမှတစ်ယောက်စီမှဆက်သွယ်လာသဖြင့်သိရှိခဲ့ရပါသည်။ အမည်ကိုမသိရှိလိုက်ရပေးမဲ့ ဖုန်းနံပတ်ကိုတော့သိထားပါတယ် (ဖုန်းနံပတ်မှ 0888740583) ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ည (၈) နာရီ (၆) မိနစ်မှာ ဖုန်းမြည်လာသဖြင့် ကိုင်လိုက်ရာ နောက်ထက်သတင်းကိုဤသို့ သတင်းဆက်လက်ရရှိပါသည်။သတင်းမှာ အောက်ပါအချက်အလက်များအတိုင်းပါ။ ထိုင်လိုထစ်အမည်ရှိလှေနံပါတ် ၂၈ ကနေပြီး လှေအမှတ် (၂၅)ထဲ့ကို လူဆယ်ယောက်ခွဲထားလိုက်ကြောင်းကို ထက်သိရပါသည်။
ယခု ၄င်းလှေကို စမူပကမ်း ခေါင်တိုင်ဆိပ်ကမ်းမှာခဏကပ်ထားကြောင်းသိရှိရပြီး။ လက်ရှိ ၄င်းလှေထဲ့မှာရှိနေသော လူဆယ်ဦးအနက်နှစ်ယောက်အမည်မှာ မောင်သန့်ဇင်အောင်
အဘ ဦးတင်ဆန်း အမိ ဒေါ် စန်းရီဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ယောက်မှာ မောင်ရဲလင်းထွန်း အဘ ဦးထွန်းဝင်းတို့၏သားဖြစ်ကြောင်း ကျန်(၈) ယောက်ကို တော့မသိရသေပါ။ သူတို့ နှစ်ဦးလုံးသည်
လှေပေါ်မှာ အရောင်းစားခံနေသော လူများကို. လူတစ်ဦးလျင် ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁၃၀၀၀ ဘတ်ဖြင့်
လာရွေးထုတ်ရန်ပြောလာသူမှာ အမည်ကို မပြောလိုပါ ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ ၀၈၅၀၆၃၀၂၀၆ ဖြစ်ပါတယ် ။ သတင်း လုံးဝအပြည့်အစုံကို လိုက်နေဆဲပါ … မြန်မာလူမျိုးများ ကရုဏာတရား
လက်ကိုင်ထားနိုင်ပြီး ......... ဒီသတင်း နဲ့ ဆက်နွယ်နေသောသတင်းကို ရရှိပါက ၀၉၀၆၃၉၄၀၂၂
ကို ဆက်သွယ်ပေးကြပါ ။။။ အရေးကြီးသောသတင်းဖြစ်သောကြေင့် share ပေးကြပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။ … နောက်တာမဟုတ်ပါ။
မှတ်ချက်........ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကူအညီတောင်းလာသူမှာ သန့်ဇင်အောင်ရဲ့
ညီအရင်းတော်စပ်သူ. ကိုပြည့်ဖြိုးဖြစ်ပါတယ် ။